Inona no mafana ankehitriny amin'ny akanjo maso amin'ny taona 2022
EyeBuyDirect dia naminavina ny fironana dimy amin'ny eyewear ho hitan'ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny eyewear amin'ity taona ity. Amin'ny fijerena ireo sary lafo vidy indrindra sy ny fikitihana ny tatitra momba ny Trends 2022 navoaka teo aloha, dia antenaina fa hirona amin'ny fironana dimy manokana ny mpanjifa amin'ity taona ity:
• Nohavaozina Neutrals: Ny tsy neutre foana no tena lasibatra raha resaka solomaso. Ny fotsy sy mainty fototra dia tsy misy, ary ny loko malefaka no tsy miandany amin'ny taona 2022, mamela ny masonao hanandratra ny akanjonao. Na avocado crème, menaka oliva, na mavo ny toho-tantely, dia manantena ny hahita solomaso maro kokoa manasongadina loko malefaka, ankoatra ny sary mazava sy mangarahara amin'ireo palette miloko ireo, lasa malaza amin'ity taona ity.
• Sarimihetsika mahery vaika, mihoatra ny ambony: Ankahalao na tiavo izy ireo, kasaina ho mpivarotra ambony indrindra amin'ny taona 2022 ny solomaso saka. Misy loko sy endrika isan-karazany ireo frame retro ireo (ny sasany sahy kokoa noho ny hafa). Ity karazana eyewear ity dia manampy maranitra amin'ny tarehy sy fikasihana be pitsiny amin'ireo akanjo mahazatra kokoa izay ataon'ny mpanjifa avy amin'ny biraony.
• Ny taloha dia vaovao indray (vintage): Na dia mety ho lamaody kokoa amin'ny vehivavy aza ny solomaso saka, dia ho hitantsika ny habetsahan'ny mpanjifa lahy mirona amin'ny solomaso antitra amin'ity taona ity. Fironana roa lehibe andrasantsika ny aviator sy ny sarin'ny mpandeha an-tongotra, na amin'ny solomaso na solomaso. Ny sarin'asa tranainy misy tsipiriany momba ny antsipirihan'ny sokatra na toro-hevitra momba ny lamosina sokatra dia mitondra tsy misy fotony izay mameno ny akanjo rehetra - ary iray izay ho hitantsika hofidian'ny mpanjifa.
• Fanatanjahantena: Ny fanatanjahantena dia mifanena amin'ny maha-olona amin'ity fironana 2022 ity, satria ny mpanjifa dia manosika ny sisintany 'fanatanjahan-tena' nentim-paharazana miaraka amin'ny solomasony, dia ho hitantsika ireo solomaso fiarovana ara-panatanjahantena futuristika, mihodidina. Ny gradients iridescent sy ny lens polarized dia mitondra tsy misy dikany ny mpanjifa avy amin'ny kianja filalaovana pickleball mankany amin'ny arabe, sady manampy sosona fiarovana ilaina.
• Mamaky Sunglasses: Ny mpamaky dia manana ny fotoanany, miaraka amin'ny mpanjifa bebe kokoa mifoka solomaso mampahazo aina sy manara-damaody izay manome fanohanana fanampiny amin'ny famakiana gazetiboky na horonan-taratasy amin'ny lohateny isan'andro. Rehefa mihalava ny andro ary mihamitombo ny maripana, dia hitady mpamaky roa ho entiny any ivelany ny mpanjifa, ka ho hitantsika ny famakian-maso solomaso manomboka mirona amin'ny volana ho avy. Na solomaso tokana miloko tokana, miloko fitaratra (manakana ny tara-masoandro 10-60% bebe kokoa noho ny frame miloko mahazatra) na solomaso famakiam-bokin'ny gradient, ny mpanjifa dia haka ity solomaso ity.
Previous Fitsapana klinika vaovao ho an'ny homamiadan'ny prostaty mahatohitra castration metastatic
Manaraka Fanatsarana ny fiainan'ireo mararin'ny Medicare voan'ny aretin'ny voa izao